“Vahoaka izahay, tsy vitsy an’isa izahay, ary manana fimaroan-karazana ara-nofo izahay.” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2018 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, русский, English
Dayana Aguilar dia mpikambana ao amin'ny El Punto Collective ao Quito, Ekoadoro. Ity manaraka ity dia dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadian'i Dayana amin'ny zavon-teny manondro ny voambolana, “LGBTI” (lesbiana, pelaka, mpiray amin'ny lahy sy vavy, mpanova taovam-pananahana, ary intersex) ao anatin'ny tokotanin-tsehatra Ekoadaoreana.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 222 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny Avrily 2018 hita nanonona “LGBTI” ao anatin'ny angona Media Cloud 2 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (Mijery sary lehibe kokoa)
Ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tamin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro ity lahatsoratra ity. Nikarakara atrikasa notontosaina tamin'ny 21 Aprily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba hanadihady ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny fomba hisehoan'izy ireo sy izany lohahevitra izany amin'ny angona media Ekoadaoreana sy hamorona tantara ho setrin'izany.